Mitombo hatrany ny ahiahy apetrak’ireo mpandinika raharaham-pirenena manoloana ny zava-miseho rehetra eto amin’ny firenena ankehitriny.
Somary nanaitra, ohatra, ny naheno fa misy tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena voarohirohy amin’ilay raharaha vola sandoka tratra omaly.
MATANJAKA I RAVALOMANANA
Nisy ihany koa ny fanadihadiana izay nataona sehatra tsy miankina iray nahitana fa tena mbola mamim-bahoaka ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Tombana hatreto dia ny hoe ho lasan’ity kandida ity ny 75%-n’ny vato eto Antananarivo ary tsy mifanalavitra amin’izay ihany koa ny tapany atsimon’ny nosy.
Ny 39%-n’ny Malagasy kosa, hoy ny mpitarika fikambanana iray izay mitonona ho anisan’ireo antsoina hoe maro an’isa tsy miteny na “majorité silençieuse” no tafiditra ao anatin’izay vahoaka mangina izay. Haneho ny heriny, hoy izy ireo, ato ho ato.